‘बुक’ शब्द ‘फेसबुक’ को पेवा रे !!! [Friday Tech]
Aakar August 27, 2010
फेसबुक मा जोडिएर आएको शब्द, ‘बुक’, फेसबुक ले आफ्नै पेवा बनाएछ ! हिजो देखि इन्टरनेट मा फेसबुक को पेवा ‘बुक’ को बारे को चर्चा आक्कासिएको छ । कुरा हो, ठूलो ‘फेसबुक’ ले सानो ‘टिचबुक’ माथि गरेको आक्रमण !
आफ्नो ‘बुक’ को सिको गर्दै, ‘टिचबुक’ साइट ले, नाम नै ‘टिचबुक’ राखेको भन्दै, फेसबुक ले निहुँ खोजेको छ ! फेसबुक ले निहूँ खोजेको मात्र हैन, ‘टिचबुक’ माथि मुद्दा नै हालिसकेको छ ! विभिन्न साइट र ब्लगहरु ले लेखिरहेका छन् : Teachbook is currently being sued by Facebook for trademark infringement — yes, the "book" part of its name. फेसबुक, अधिकांश मानिस को समय लुट्ने वेवसाइट हो भने, टिचबुक शिक्षकहरु को अनलाइन कम्युनिटि हो, जसले शिक्षकहरु को समय राम्रो काम मा खर्च गराउँछ । टिचबुक मार्फत शिक्षकहरु, सामुहिक रुपमा भेला भएर छलफल गर्छन्, कक्षा प्लान आदि बनाउँछन् । तर सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुक ले क्यालिफोर्निया को अदालतमा हिजो टिचबुक विरुद्ध ‘बुक’ को विषयमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
हेर्दा, सामान्य लाग्ने घटना छ ! कपिराइट को प्रसंग नि उठ्ला तर के ‘बुक’ भन्ने कुरा, ‘फेसबुक’ को पेवा हो र ? के अरु कसैले ‘बुक’ भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्न नपाउने हो र ? निहुँ नै खोज्ने हो भने, ‘फेसबुक’ भन्दा धेरै पहिले देखि ‘ब्ल्याकबुक’ नाम को एक पब्लिकेशन हाउस छ, जसले पाठ्यपुस्तकहरु छाप्ने गर्छ । यही ‘बुक’ को निहुँ मा अरु ले पनि, फेसबुक को विरुद्ध मुद्दा हाले फेसबुक के गर्छ ? ठूला माछा ले सानो माछा लाई खान्छ भन्ने प्रवृति ‘फेसबुक’ को यो कदम ले देखाएको छ ।
कुरै गर्ने हो भने, ‘ईबुक’ नामक अर्को एउटा साइट छ ! ‘ईबुक रिडर’ सफ्टवेयरहरु विभिन्न कम्पनीहरुले निर्माण गरिरहेका छन् । के ती सबै ‘बुक’हरु आफ्नै पेवा हो भन्दै, ‘फेसबुक’ ले मुद्दा हाल्नु कति को न्यायससंगत छ? यदि त्यस्तै भन्ने हो भने, हामीले पढ्ने गरेको ‘बुक’लाई किन फेसबुक ले आफ्नो साइट ‘बुक’ जोडेर, हाम्रो बुक (किताव) को बदनाम गर्यो भनेर,फेसबुक सँग निहुँ खोज्न सकिन्छ !
सायद ‘फेसबुक’ र ‘टिचबुक’ उस्तै सुनिन्छ भनेर पनि, फेसबुक ले निहुँ खोजेको हुनसक्छ तर जसले जति नै भनेपनि, ‘बुक’ फेसबुक को पेवा हुँदैन । ‘बुक’ शब्द जो सुकै ले, जुनसुकै साइट मा पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । संसार मा, नाम मा ‘बुक’ जोडिएका धेरै साइटहरु छन् ।
‘ब्ल्याकबुक’, ‘ईबुक’, ‘टिचबुक’,’कुकबुक’,’रेसबुक’, ‘डक्टर्सबुक’, ’टेस्टबुक’, ‘स्क्रापबुक’, ‘होटेलबुक’ :P , ‘रनबुक’, ‘ट्विटबुक’ आदि त केही उदाहरणहरु मात्र हुन् ।
अचम्म लाग्यो, फेसबुक का ‘मालिक’हरु को मतिभ्रष्ट किन भएको होला ?
तपाईलाई के लाग्छ ? के ‘बुक’ शब्द फेसबुक कै पेवा हो । तयार रहनुहोस्, फेसबुक को विरुद्ध मा अनलाइन आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ !!! :D
Nirmal Gyanwali August 27, 2010 at 7:12 AM
फेसबूक को यो मुद्दाले Teachbook लाई बिना अर्थको सफलता मिलेको छ, कसैले नसुनेको र चल्दै नचलेको site ko प्रचार प्रसार भएको छ । मैले त्यो साईट म गएर मेम्बर बनेर पनि हेरे, त्यस्को कुनै व्यवोस्थित लागेन, यो साधारण JOOMLA CMS मा गरिएको site हो । Functionality त्यती managed पनि छैन । केही extra कुरा नै छैन । यस्ता भुरे साईटलाई मुद्दा हाल्नुको कुनै अर्थै छैन ।
Bishnu Subedi August 27, 2010 at 1:14 PM
testai hoo bhane ta http://www.fuckbook.com/ lai pani facebook le Mudda dine hola....maile pani book nai rakhera youta blog banaune sur ma thye....
Dilip Acharya August 27, 2010 at 2:15 PM
म प्राय: दिनहुँ फेसबुक चलाउँछु तर यो कुरामा भने फेसबुक मात्तिएकै हो ।
केही दिन अगाडि एकजना साथीले एउटा साइटको एड्रेस दिएका थिए: http://nepalibook.com/
भन्ने। फेसबुकलाई बाऊको सम्पत्ति नै ठानेर जम्मै चोरेर बनाएको साइट । त्यस्तो काम भने गलत हो । तर यो 'बुक' जत्ति सबै उसको पेवा हो भन्न थाले पछि २-४ वर्षमा त 'चेक बुक', 'नोट बुक', 'टेक्स्ट बुक' लेख्दा पनि उसैलाइ रोयल्टी तिर्नु पर्ने होला :)।
Sanjog August 27, 2010 at 2:31 PM
त्यो जाबो लाई मुद्धा हाले हुन्छ नि ।
तेसो गरे कसो होला ।
Ashesh August 27, 2010 at 3:04 PM
यसैको विरोधमा आजवाट २ दिन कसैले फेसवुक नचलाउने भन्दै ईमेलबाटै धनाई दिउँ न बोरू । जे पर्ला......परेको म वेहोर्छु!!!!!!!!!!
Optimum Economic Freedom August 27, 2010 at 9:21 PM
b,o,o,k तिन अल्फावेट facebook ले लिए पछि अब बाँकी २३ वटा मात्र बाँकी रहयो हैन त?? यस्तै हो भने पछि नाम लेख्नने अक्षर पनि कुनै कम्पनि संग सापटि माग्नु पर्ने भयो !!
facebook ko against ma facebook batai andolan gare ho bhane mero samarthan cha Aakar ji.
Rabindra August 28, 2010 at 8:30 PM
त्यो नेपालीबुक त अत्ति नै भो ! www.fakebook.com नै छ नी ! धेरै पर किन जानु पर्यो र !
teachbook.com अलि उपयोगी हुने र आफुँलाई खतरा हुने डर भएकोले यसो गरेको हुन सक्छ । वा यो सब मिलेमतोमा प्रचारवाजीको प्रोपागान्डा पनि हुन सक्छ । यो हेपाई लाई चाहिँ जवाफ दिनै पर्छ जसरी हुन्छ ।
merodhesh August 29, 2010 at 12:59 AM
it is unlawful and ridiculous things.
Suraj August 30, 2010 at 12:23 AM
यो त फेसबुकको phishing साईट हो जस्तो छ। यस्लाई त चाँडै मुद्दा हालोस्।
MY DESH November 12, 2010 at 4:01 AM
Optimum Economic Freedom November 12, 2010 at 4:01 AM
Ashesh November 12, 2010 at 4:01 AM
Nirmal Gyanwali November 12, 2010 at 4:01 AM